ukuphela komshini wokugaya umshini - Shangrui Machinery Co., Ltd.
ukuphela komshini wokugaya umshini
Usendaweni efanele ye- ukuphela komshini wokugaya umshini.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe Shangrui Machinery Co., Ltd..siqinisekisa ukuthi kulapha Shangrui Machinery Co., Ltd..
Umkhiqizo awusizi kuphela ukuvikela ama-ankle sprains, kodwa futhi usiza ukufeza inhlanganisela emnandi yenduduzo, ukuvikelwa kanye nokuzizwa komhlaba..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu ukuphela komshini wokugaya umshini.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
Umshini womshini weCustomizde 650t oshisayo womshini
Ekuhambeleni kwesibili esitshalweni, abaseTage Tao kanye nochwepheshe banqume ingcindezi yokucindezela okushisayo kwe-650t, izinga lokushisa eliphakeme kakhulu labezindaba lingafinyelela ama-degree angama-180. UMnu Tao ubekade enethemba elikhulu ngomshini wethu selokhu wazama ama-400t abezindaba efektri yethu okokugcina. Kepha ngenxa yokuqubuka, akazange athole ithuba lokuxoxa ngemininingwane yomshini. Ngemuva kwalokhu kuvakashelwa, sammukela ngemfudumalo futhi sambonisa izingxenye zemishini nemishini ekhiqizwa efektri. Ukusuka engxenyeni ngayinye kuya epuletini lensimbi, intengo imakwe ngokucacile futhi kuboniswe ngokomzimba. Ochwepheshe bahamba naye usuku lonke ukuze baxoxe naye, futhi bamnikeza ukukhetha okungabizi kakhulu. Ngisho nomshini wokufanisa umbala womshini, ukuthutha, ukufakwa kanye nokulayisha ukulayisha kusiza ukuhlinzeka ngezinhlelo ezahlukahlukene.
Zonke izinhlobo zephaneli kanye nemishini yokukhiqiza ifenisha yokhuni eqinile
Ukukhiqizwa kobungcweti kwephaneli ehlukahlukene nemishini yokukhiqiza ifenisha yokhuni, ngokwezidingo ezahlukahlukene zokuklanywa kwamakhasimende nokukhiqizwa kwemishini engeyona eyejwayelekile
I-Multi-blade wabona umshini wemikhiqizo ye-shangrui nezinto zokwakha zensiza
I-Multi-blade saw for shangui imikhiqizo nezinto zokwakha zensiza.
Ukusebenza okwenziwe ngokwezifiso kweplatform ye-wiring amafektri ahlukahlukene
Ipulatifomu yokuphakamisa isetshenziselwa ikakhulukazi ukusebenza kwe-wiring kwamafektri ahlukahlukene. Inohlelo lokusebenza lwe-wiring lokuphakamisa kwangaphambili nokubuyiselwa emuva, futhi lungasetshenziswa futhi ngokuzimela ukwenza lula ukuphathwa kwezinto zokwakha. Yehlisa kakhulu umthwalo womsebenzi wabasebenziUmthwalo, ukuletha lula ukulayisha ukusebenza. Ilungele ukukhiqizwa kwesisindo semishini ehlukahlukene yokusebenza ngokhuni. Kuyithuluzi elisizayo elibalulekile lamafektri amakhulu.
I-SHANGRUI MACHINICKINES POCK ALBUM
Isitifiketi semishini yaseShanggui
I-Professional-side saw saw msj3315x50 abakhiqizi
I-Shangrui mishini ye-SHANGRUI CO, Ltd. I-Professional Professional side saw saw msj3315x50 abakhiqizi, ukukhiqizwa kochwepheshe kwezinhlobonhlobo zephaneli kanye nemishini yokukhiqiza ifenisha eqinile, ngokwezidingo ezihlukile zemishini yamakhasimende kanye nokukhiqizwa kwemishini yamakhasimende.
Ubukhulu bethebula elenziwe ngokwezifiso buyisela umshini we-saw trimming saw
Ubukhulu bethebula elenziwe ngokwezifiso buyisela umshini we-saw trimming saw.
Uma uneminye imibuzo, sibhalele
Kunikezelwe ekuhlinzekeni abasebenzisi ngobuchwepheshe obuhle kanye nensizakalo yekhwalithi.